ကျိုးပျက်နိုင်သော စံချိန်များ (ထောင်စုနှစ် မိုးခေါင်ရေရှားမှု သင်ခန်းစာများ) - Myanmar Water Portal
Photo Credit - International Water Association (IWA)
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် မကြာခဏ မိုးခေါင်ရေရှားပါးမှုသမိုင်းရှည်ကြာရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ၄င်း၏ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအများစုမှာလည်း ရေရှားပါးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အားထုတ်ခဲ့ကြသည်။ မြို့တော်များ ရပ်ကွက်များ နှင့် အဓိကရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေး စနစ်များ၊ အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးမြင့်မားသော၊ ရှုတ်ထွေးသော Murray Darling မြစ်ဝှမ်းဒေသ (MDB: Murray Darling Basin) သို့ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော ရေထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ရန် ရေသိုလှောင်(ကန်)များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အခြားတိုင်းပြည်များထက် သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် လူဦးရေအပေါ်ရေလိုအပ်သည်ထက် ပိုမို သိုလှောင်ထားနိုင်လာသည်။
ထောင်စုနှစ်ရေရှားပါးမှု အစောပိုင်းနှစ်များတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ မြို့ပြရေ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည် တန်ပြန် ရေပြတ်လတ်မှုအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒဆိုင်ရာ တင်းကျပ်ခြင်းများနှင့် အရေးပေါ်အတွက် အပိုရေစုဆောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသူများမှာ စိတ်ချရသော သွင်းရေ ချိတ်ဆက်ယူရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိခဲ့သည်။ MDB တွင် မရင့်ကျက်သေးသော ရေစျေးကွက် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသူများအတွက် ထိခိုက်မှုများကို လျော့ချ ရေပြတ်လတ်မှုကာလ အတွင်း ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ရွေးချယ်မှုများ ပေးခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ထောင်စုနှစ် မိုးခေါင်ရေရှားပါးမှုသည် မှတ်တမ်းတလျှောက် အရှည်ကြာဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံး မိုးခေါင်ရေရှားပါးမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၃ နှစ်တာ ကြာရှည်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ် ၂၀၀၆-၀၇ တွင် မိုးအခေါင်ဆုံးနှစ် အဖြစ် မှတ်တမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် မိုးခေါင်ရေရှားပါးမှုသည် ကျွနု်ပ်တို့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော စဉ်းစားထားသော မူဘောင်များ၊ တာတမံများနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်များ၏ ဘောင်ကို ကျော်လွန်သော အခြေအနေကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တောင်သြစတြေးလျ နှင့် MDB အများစုအတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ညွှန်ပြချက်များအရ ထိုအခြေအနေများသည် နောင်အနာဂတ်ကာလတွင် ပိုမိုတွေ့ကြုံလာနိုင်သည်။ ရေစီမံခန့်ခွဲသူများ အနေနှင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ရေပြတ်တောက်မှုကာလအတွင်း ရုန်းကန်ရန်အတွက်သာမက ပိုမိုခြောက်သွေ့သော အနာဂတ်ကာလတစ်ခုသို့ အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲရန် ခွင့်ပြုသော မူဝါဒများ၊ ရေစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ တိုးတက်စေရန် နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန် အရေးပါကြောင်း သိရှိလာရသည်။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့် မြို့ပြရေစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် သုံးစွဲသူများ၏ အပြုအမူပြောင်းလဲရန် အစီအမံများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မက်လုံးများ နှင့် တင်းကျပ်မှုများကို အသုံးချမှုများမှတဆင့် ရေလိုအပ်ချက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို အားပေးသည့် လုပ်ငန်းများကို အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ မြို့ပြရေထောက်ပံ့မှု အငြင်းအခုန်နှင့် ပေါင်းစပ်မိပြီး ရေပြန်လည် အသုံးချမှု၊ မိုးရေနှင့် မြေအောက်ရေ၊ ရေငန်သန့်စင်စက်ရုံများ နှင့် မိုးရေကိုအမှီ်ခို ကင်းသောရေရင်းမြစ် အစရှိသော နည်းလမ်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် ကွဲပြားသော အစီအစဉ်များ ဖန်တီးလာကြသည်။
ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသူများအတွက် ရေစျေးကွက်သည် ရေရှားပါးသော ကာလအတွင်း ၄င်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်နှင့် ၄င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းပေးနိုင်သော အဓိက ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရေရှားပါးကာလအတွင်း လူအများ ရေရောင်းချဝယ်ယူသည်နှင့် အမျှ MDB တွင် စျေးကွက်အသုံးချမှု မြင့်မားလာခဲ့သည်။ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးမှုသည်လည်း ရေအနည်းငယ်သာ အသုံးပြုပြီး အထွက်နှုန်းပိုမိုထွက်ရှိကာ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ပိုမိုခြောက်ခမ်းလာမည့် အနာဂတ်တစ်ခုတွင် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးအသိုင်းအဝိုင်းကိုထိန်းညှိစေရန် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ ခေတ်မီတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရေအကျိုးရှိရှိအသုံးချသော ရေသွင်းစိုက်ပျိုးလယ်ယာများတွင် အစိုးရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများက အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကို ပိုမို အားဖြည့်စေခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူများက ရေခမ်းခြောက်သည့် ကာလအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရေအသုံးချမှု ဦးစားပေးခြင်းတို့အတွက် ခိုင်မာသော မူဝါဒအသစ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဓနသဟာရ အစိုးရက MDB တွင် ရေအလွန်အကျွံသုံးခြင်းနှင့် မျှချေပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ရည်ညွှန်းသော အဓိကကျသော ရေရှည်အစပျိုးမှုတစ်ခု ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ရေခမ်းခြောက်မှုအတွက် တုန့်ပြန်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်း ရေစီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာပေါင်းစုံတွင် လက်ရှိကာလအထိ ပါဝင်ပတ်သတ်သော သင်ခန်းစာ အမြောက်အများကို သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ၄င်းသင်ခန်းစာများမှာ-
အနည်းဆုံးမိုးရေချိန် သမိုင်းမှတ်တမ်းများသည် ကျိုးပျက်နိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်နားလည်ခြင်း နှင့် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် သရုပ်ဖော်မြင်ကွင်းစီစဉ်ချမှုကို နည်းပညာပိုမိုမြင့်မားသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြင့် သွားရန်
မည်သည့် အရွယ်ပမာဏ မဆို၊ မြို့ပြအာဏာပိုင်များ၊ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူများ အစရှိသည်ဖြင့် ပါဝင်သော ရေဘက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးကပြုလုပ်သော ရေရှားပါးမှု အစီအမံ၏ အရေးပါမှု။ အကျိုးရှိသော ရေရှားပါးမှု အစီအမံသည် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အားလုံးကရေရှားပါးသောကာလအတွင်း ရေရှားပါးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး ထိခိုက်မှုများကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချပြီး ၄င်းတို့၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ကို လျှော့နည်းစေသည်။
ရေအသုံးချခွင့်ရှိသောသူများအားလုံး ၄င်းတို့၏ ထိခိုက်နိုင်မှုများကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ရန်၊ လျှော့ချနိုင်ရန် ပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်း
ရရှိနိုင်သော ရေကို ၄င်း၏ အသုံးချမှုတန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင် အတွက် တန်ဖိုးအများဆုံး ဖြစ်လာစေခြင်း
အိမ်သုံး၊ စီးပွားဖြစ်၊ စက်ရုံသုံး၊ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အစရှိသော နယ်ပယ်အားလုံးတွင် ရေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရန် ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းရန် လိုအပ်မှု။ ထိုလိုအပ်မှုသည် မိုးခေါင်ရေရှားပါးမှု၏ ဆိုးကျိုးများကို သိရှိစေပြီး အနာဂတ်အတွက် ပိုမိုခံနိုင်စွမ်းများ ပြုလုပ်စေသည်။
အနာဂတ် ပိုမိုမိုးခေါင်ရေရှားပါးသောကာလတစ်ခုတွင် ရေထောက်ပံ့မှု သေချာစေရန် မတူကွဲပြားသော ရေအထောက်အပံ့ အစီအမံများ၊ ဘက်ပေါင်းစုံအသုံးပြုခြင်း၊၊ ပြန်လည်အသုံးချမှုနှင့် ရေငန်မှ ရေချိုချက်လုပ်ခြင်း အစရှိသော နည်းလမ်းများ လိုအပ်မှု
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ တုန့်ပြန်မှုကို သဘောပေါက်နားလည်ရန် လိုအပ်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်မှုနှင့် ဘေးကျပ်နံကျပ်ဖြစ်နေသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေများတွင် ကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲနိုင်ရန် လိုအပ်သောအကူအညီများပေးရန် လိုအပ်မှု။
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ထောင်စုနှစ်မိုးခေါင်ရေရှားပါးမှု ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် သင်ခန်းစာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိရန် အဓိကကျသော ကနဦးလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ကြုံတွေ့လာမည့် မိုးခေါင်ရေရှားပါးသော ဒေသများတွင် ပိုမိုရေပြတ်လတ်မှုများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်တချို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပေမည်။
Translated by Arkar Phyo - Port engineer with B.E & M.Sc in port, coastal and offshore engineering field. Working asamarine civil engineer in Myanmar Koei International Ltd. since 2015. Interested in port planning, and breakwater design.
Source - "Records can be broken - Lessons from the Millennium Droughts" - International Water Association
Ecosystem Services Drinking Water Dams & Bridges Water Quality Urban Development Waste Water Groundwater Integrated Water Resources Management Flooding Climate Change